Nagu saabsan - Jilin Yuantong Macdanta Co., Ltd.
Jilinyuantong Macdanta Co., ltd. oo ku taal Baishan, Gobolka Jiling, oo ah meesha ugu sarreysa diatomite ee Shiinaha xitaa Aasiya, waxay leedahay 10 hoosaad, 25km2 aagga macdanta, 54 km2 aagga sahaminta, in ka badan 100 milyan oo tan oo kaydka diatomite ah oo ka badan 75% dhammaan keydka Shiinaha ee la xaqiijiyay. Waxaan haynaa 14 khadadka wax soo saarka ee diatomite kala duwan, oo leh awood wax soo saar sanadle ah oo ka badan 150,000 tan.
Ilaa hadda, Aasiya, waxaan hadda noqonay soo saaraha ugu weyn ee diatomite kala duwan oo leh keydka ugu weyn ee kheyraadka, tikniyoolajiyadda ugu horumarsan iyo saamiga suuqa ugu sarreeya ee Shiinaha iyo Aasiya. Tan iyo markii la aasaasay 2007, waxaan abuurnay shirkad si qoto-dheer u shaqeysa qoto-dheer oo isku dhafan macdanta diatomite-ka, wax soo saarka, iibka, iyo R&D iyadoo lala kaashanayo asxaabta ka socota qeybaha kala duwan ee nolosha.
Intaa waxaa dheer, waxaan helnay ISO 9 0 0 0, Xalaal, Kosher, nidaamka maaraynta badbaadada cuntada, nidaamka maaraynta tayada, shahaadooyinka liisanka wax soo saarka cuntada. Sida sharafta shirkadeena, Waxaan nahay cutubka gudoomiyaha ee Guddiga Xirfadleyda Macdanta Warshadaha ee Shiinaha ee aan macdanta lahayn, qaybta diirimaadka warshadaha gargaarka ee diatomite ee Shiinaha iyo Xarunta Teknolojiyada Jilin ee Gobolka.
Had iyo jeer u hoggaansanaanta ujeedada "macaamilka ugu horreeya", waxaan si xamaasad leh u siineynaa macaamiisha badeecado tayo wanaagsan leh adeeg ku habboon oo feker leh iyo talo farsamo. Jilin Yuantong Macdanta Co., ltd.waxay diyaar u tahay inay saaxiibo kahesho adduunka oo dhan oo ay gacmaha isqabsato si loo abuuro mustaqbal ifaya.
Tartanka Muhiimka ah
Saamiga suuqa ayaa ka badan 60%